ကျုပ်တို့ရွာသားတွေ ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြ၇အောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျုပ်တို့ရွာသားတွေ ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြ၇အောင်
- Sky ko ko
Posted by Sky ko ko on Nov 22, 2011 in Copy/Paste | 31 comments
သိသလို/ ထင်သလို / ကြိုက်သလို ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်....
About Sky ko ko
View all posts by Sky ko ko →
1) လူတစ်ယောက် က မျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ၊ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါ မှာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
2) လူတစ်ယောက် က အောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) မရလာတဲ့အခါမှာလဲဘဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
3) လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလပါတ်လုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘဲလဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
4) တစ်မင်တစ်ကာပြောင်းလဲပြစ်ခြင်းနဲ့ လဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
7) အချုပ်ပြောရရင် အချိန်အခါ နေရာဒေသမရွေး အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါကို လူလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခြားသောသတ္တ၀ါတွေမှာလဲ ဒီလိုအရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။
အဲ.. နောက်ပြန်ပြီ … ။
မေးခွန်းထုတ်တဲ့လူကို ကျွန်မကလည်း ပြန်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ် … ။
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ … ။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲတာလဲ … ။
စိတ်ပြောင်းလဲတာလား ။ အမူကျင့်ပြောင်းလဲတာလား ။ ပြောဆို ဆက်ဆံပုံပြောင်းလဲတာလား ။ အနေထိုင်ပြောင်းလဲတာလား ။ အကြိုက် ၊ အသုံးဆောင်ပြောင်းလဲတာလား ။ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲ ဖွံ့ ဖြိုးလာတာလား ….. ။
မေးခွန်းပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေဆိုတဲ့အဖြေကွာခြားသွားတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ပါ
Sky ko ko says:
မမ tone မေးတဲ့မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေ၇မယ်ဆိုရင်…
ကျုပ်မေးချင်တဲ့ သဘောက “ကျုပ်တို့မှာအဓိကအရင်းခံတဲ့ စိတ်ထား“ ကိုမေးချင်တာပါ…
စိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ …လူတွေဟာတစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေပါတယ်။ … မွေးလာကတည်းက အခုချိန်ထိ တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေပါတယ်။…
ကဲကဲ … ဒါဆိုရင်တော့ ညီမလေးအဖြေမှန်ပါတယ်ကွယ်….
မဟုတ်သေးဘူးလေ.. စိတ်နေသဘောထားကနေ… အမူအကျင့်ကို ပြောင်းလဲသွားတာကို ပြောတာ..
အရင်းခံစိတ်က အချိန်တိုင်းမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် … ကြုံတွေ့ ၊ ဆုံတွေ့ရတဲ့ အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီး တန်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သလို …ဘာမှ ရေရော ရာရာမဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲသွားတာလည်း ရှိတတ်တယ် … ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုတာ အစိုးမရလို့ …. အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် .. ။
သည်တခါတော့ ဂယ် မန့်ပီ..
ဟုတ်တယ်လေ …ရွာသူားတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပါ
(ပေါက်-ပေ-လူး-ဂီ-အီး-မှော်-စည် သိုင်းညီနောင် ၇ဖော်မှ အငယ်ဆုံး အချောဆုံး သိုင်းသမားလေး)
မှားပါတယ်… (အီး ပေါက် ပေ လူး မှော် စည် ဂီ ) ရွာ ထဲက အရူး ၇ဖော်မှ အငယ်ဆုံး သွက်သွက်ခါအောင် အရူးဆုံး အရူး ဂင်ဇာအီ(or) ဂင်နှူးဘာ (ခတ္တကိုရီးယား).. right ? …
အီးကဘယ်သူလဲဗျ။ ရွာထဲမှာအီး ၃ယောက်ရှိတယ်။ ကအင်ကြီးနာမည်လည်း အီး_ ဘယ်သူဆိုလား။ စိတ်ကိုပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ သိုင်းညီနောင် ၇ ဖော်ထဲမှာ ကျွန်တော် မောင်အီးတီက ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ထားကောင်းပြီးသား ဆိုတော့ မပြောင်းလဲတော့ဘူး။
(အီး ပေါက် ပေ လူး မှော် စည် ဂီ ) ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့
ရွာကာလသားတွေထဲမှာ… စည်က ချစ်ဖို့အကောင်းဆုံး..
နုထွားကြီး.. ငွင်းငွင်း.. (ဂယ်ပြောဒါ ဂီဂီနဲ့ အီးတီလို့
တားတားက လိမ်ပြေဒတ်ဒါ ဟုတ်ဝူး..)
အဲ… ခေါင်းစဉ်ကို ၀င်ဖောမယ်..
လူရဲ့ စိတ်က စက္ကန့်တိုင်းကို ဇော ၇ ချက်နဲ့
ပြောင်းလဲနေတာ… စိတ်ရဲ့ အလျင်နဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို
လူတိုင်းက အခြေခံအားဖြင့် စိတ်ကောင်းရှိကြဒယ်…
ကိုယ့်ဘ၀ကို ကြိုက်သလို ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်..
ဟူး… ဒါဗြဲ.. မောတွားပီ..
အဖေ၊အမေ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကို တကယ်သိရှိမြင်တွေ့လာတဲ့တနေ့၊ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားတဲ့အရာကို ပိုင်ဆိုင်ရဘို့အတွက်သော်၎င်း၊ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါသော်၎င်း၊ပြီးတော့ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အကြောင်း၊အကျိုး အကောင်း၊အဆိုးတွေပေါ်မှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဥာဏ်အမြင်နဲ့ သိပြီးပြောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မှားတယ်မှန်တယ် ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ တွေးကြည့်၇င် သိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…
ဟုတ်ပါတယ်… ကျုပ်တို့တစ်တွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်က ဘယ်အချိန်လဲဆို၇င်… “ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက် “ ပြောင်းလဲတဲ့အချိ်န်ပါ…
ဘယ်နေရာမှာမဆို ကျုပ်တို့တစ်တွေ ခံယူချက်ပြောင်းရင် ကျုပ်တို့၇ဲ့ အကျင့်စရိုက်အနေအထိုင်အသွားအလာ အစားအသောက်ကအစ ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်…
ဒါကို ဥပမာတစ်ခုလေးနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်…. ကျုပ်က ဒိ mandalaygazette မှာ နေချင်သလိုနေ၊ Post တွေ(၂)ခုထက်ပိုတင်လို့တင် လုပ်နေခဲ့တယ်ထား…. အဲဒိအချိန်မှာ ကျုပ်က ဖြစ်ကတတ်ဆန်း၊ မသိဖာသာနေခဲ့တယ်ပေါ့… ဒါနဲ့ ကျုပ် ခံယူချက် ပြောင်းလိုက်မယ်.. “ငါအဲသလိုမျိုး သူကြီးချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ဖောက်နေတာ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ ကိုယ့်လိုပဲ တစ်ခြား၇ွာသူရွာသားတွေ post အများကြီးတင်ချင်ကြမှာပဲ(ဥပမာနော်)၊ ငါကဘာကြောင့် သူတို့လို သူကြီးချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို လိုက်မနာနိုင်ရမှာလည်း၊ နောက်ဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ထားလိုက်ရင် ကျုပ်ပြောင်းလဲသွားတယ် မဟုတ်လား?“
ဒါကြီးရေးပြီး ဘာလို့၃ခုတင်လဲ မသိဘူးနော်။ လက်လွန်သွားတယ်ထင်တယ်။
ဟုတ်တယ်အီးတီရေ… ကို blackchaw ပြောမှ သိရလို့… သိသိချင်း ဒါကြီးကို ရေးတာပါဗျာ…
ခြုံပြောရရင် ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ရပ် အပေါ်မှာ သော်၎င်း …၊
အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ရပ် မရှိနိုင်တော့တဲ့ အချိန်အခါ ၌ ၎င်း…၊
ပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့ကြုံရနိုင်တယ် လို့ ထင်မိပါကြောင်း….။
victor soemoe says:
အကောင်းဆုံး ဆိုတာကို သိတတ် ခံစားတတ်မယ်ဆိုယင် –
ပြောင်းလဲ မှု တစ်ခု တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် –
ပြောင်းလဲ = ပြဲလောင်း
လောင်းစဲ = လဲစောင်း
စောင်းမဲ = စဲမောင်း
မောင်းတဲ = မဲတောင်း
ပြောင်း သွားတိုင်း လဲလဲ ပြကြတာမမြင်ဘူးကြဘူးလားဗျ
တီဗွီ ထဲမှာ ခဏခဏတောင်ပါသေးတယ်
ဒီတစ်ခါလဲ ကြတာတော့ ““မိန်းမအဆင်ကြီးဗျို့””
ယုံကြည်ချက်တစ်ခုက မမျှော်လင့်ဘဲ ပြောင်းပြန်သက်ရောက်ပေးခဲ့ရင်
လူ့ရဲ့စိတ်က အဆုံးစွန်ထိပြောင်းလဲ သွားတတ်တယ်
(ဥပမာ- အပူ ကနေ အအေး ကို)
ခံယူချက်၊ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ပြောင်းလဲသွားရင် လူ့ကပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထင်တာပဲ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ခုလက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေရတာမို့ ကို့ခံယူချက်နဲ့ မန့်လိုက်တာပါ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်
ကျုပ်ပြောချင်တာ အဲဒီ ခံယူချက် ပြောင်းလဲသွား၇င် လူတစ်ယောက်ကတစ်ကယ်ပြောင်းသွားပါတယ်…
ငါလို့ ခံစားမိတဲ့အချိန်မှာ ကံသုံးပါး တပါးပါး သို့မဟုတ် နှစ်ပါး သုံးပါးစလုံး ဆက်တိုက် ပြုလုပ်မိကြတယ်။ စကားလုံးကောက်နဲ့ သိလွယ်အောင်မိုလို့ တရားသဘောနဲ့ ယှဉ်ပြောမိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ မရှိတဲ့ ငါကို အဟုတ်ထင်စွဲနေမှုကို ပယ်နိုင်ရင် ပြောင်းလဲခံစားနေရခြင်းသဘောကို လွန်ဆန်လို့ရသွားပြီ။
အင်္ဂါ သက်ရောက်ထဲရောက်ရင် ပိုပြီးတော့ အပြောင်းအလဲ များတတ်ပါတယ်။
နီလေး အဖြေကို သဘောကျတယ်……
ခံယူချက်၊ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ပြောင်းလဲရင် လူလည်းပြောင်းလည်းသွားပါတယ်။
အေမီ စဉ်းစာမိတာလေး ရေးချင်ပါတယ်။ အဲဒိခံယူချက်၊ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကိုတွေကရော ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာလဲ……….
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေနေတွေကြောင့်၊ တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် ပြောင်းလဲရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ချို့အတွက်ကျတော့ ဒီပုံစံဆို ဒီပုံစံ၊ ဒီအကျင့်စရုက်ဆိုရင် ဒီအကျင့်စရိုက်ဆိုတာတွေ မပြောင်းတာက သူတို့ကိုအောင်မြင်မှုကို ရစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ “survival of the fitness” ဆိုတဲ့စကားကလည်း ရှိသေးတယ်။
လူဆိုတာ အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေပါတယ်။ မိုးကောင်ကင်ကြီး အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေသလိုပါပဲ။
အရှိကိုအရှိတိုင်း လက်ခံတဲ့အချိန် လူ့စိတ်ဟာ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်